Wararkii ugu danbeeyey Xaalada magaalada Galkacyo ee gobalka mudug – STAR FM SOMALIA
Maamulka Puntland ayaa horay u soo saaray amar ku saabsan in dadka sida sharci darada ku degan guryihii dowladdii hore laga saaro, waxaana taasi ay keentay inay ka soo horjeestaan dadkii degenaa.
Afar ruux oo rayid ah ayaa ku geeriyootay markii gaari ay saarnaayeen rasaas lagu furay xalay fiidkii, halka shan kalena ay ku dhaawacmeen.
Wararka qaar ayaa sheegaya in gaariga lagu waday qof dhaawac ahaa, waxaana la sheegayaa in ciidamada ay ka shakiyeen, kadibna rasaas ku fureen.
Maleeshiyaad hubeysan ayaa la sheegay inay ka biya diidan yihiin in guryihii dowladdii hore ay ka baxaan, waxaana xiisad saaka laga dareemayaa magaalada Galkacyo xiisad la xiriirta arrintan.
Qeybo ka mid ah xaafadaha Galkacyo ayaa xalay laga maqlayay rasaas, waxaana saraakiisha ammaanka ay sheegeen inay jiraan kooxo ka soo horjeeda dowladnimada.